Malunga nathi-isiXeko sasePutian esiHandsome seKhaya esiHombisa Co., Ltd.
Ukuhonjiswa kweKhaya oku-Handsome kubekwe kwisiXeko sasePutian, isixeko esiselunxwemeni kumazantsi mpuma e-China, eyasekwa ngo-1998, egxile kubugcisa besinyithi obenziwe nge-3D. Kude kube ngoku, kukho uthotho olu-4 ngolu hlobo lulandelayo:
1) CHB (ipeyinti yealuminiyam enemibala)
2) HB (ipeyinti yealuminium)
I-3) LH (i-aluminium relievo, eyindibaniselwano yokupeyinta ioyile kunye nomfanekiso oqingqiweyo wealuminium).
4) Ukupeyinta kwe-LED
Umzi mveliso wethu ugubungela i-8000 yeemitha zesikwere kunye negumbi lesampulu leesampulu ezili-1000. Sihlala kumgaqo "umgangatho wokuqala, inkonzo yokuqala, ukuphuculwa okuqhubekayo kunye nezinto ezintsha ukuhlangabezana neemfuno zabathengi.
Yintoni ipeyinti yeoyile yentsimbi ye3D
Ukupeyinta ioyile yentsimbi ye-3D yimveliso entsha kakhulu, yipeyinti yesandla kwipleyiti yealuminiyam ebunjiweyo.Ukuzoba kwimizobo ye-canvas, ezesinyithi zinamandla esinyithi kunye nefuthe lokukhanya okutyebileyo kwe-3D kwizibane, ubukhulu becala ngaphakathi kwekhaya, ihotele, iofisi kwaye kwihombo.
Umphezulu wealuminium uye wakhazimla emva kwexesha ngaphambi kokupeyinta. Imithambo entle kwibhodi yealuminium kufuneka ipolishwe amaxesha amaninzi ukuyenza ibonakale intle kwaye inempilo.
Umzobo webhodi yeAluminiyam uyilo olutsha kunye nemveliso eyandisiweyo evela kwipeyinti yealuminium.
Ibhodi ye-aluminium ephosiweyo phambi kwepeyinti yesandla ebhodini, kwaye ugqume ukutyabeka okucacileyo ukwenza umzobo ukhazimle kwaye ugqibelele.
Malunga ne-30 yoyilo olutsha ziya kuphuhliswa inyanga nenyanga kwaye zonke zibekwe kwigumbi lesampulu, eligubungela i-1000 yeemitha zesikwere. Wamkelekile ukuba usityelele.
I-HANDSOME ARTS iya kwi-CANTON FAIR nakwezinye ii-Fairs zeFenitshala zamanye amazwe unyaka nonyaka, isasaza uphawu kunye neemveliso kwihlabathi liphela.
Ngomzamo ongagungqiyo, i-HANDSOME ARTS ngoku iphumelele ikhredithi ethembekileyo kunye negama elihle phakathi kwabathengi bethu ngokhuphiswano olungcono. Wamkelekile ukwandisa ishishini nathi ngesandla!
Uhlobo lweGumbi leSampula